Junior Staff (After Sales Services Team), Onepay | AGD Bank
Junior Staff (After Sales Services Team), Onepay
Product အသုံးပြုပုံနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် Customer မှ စုံစမ်း မေးမြန်းသည်များကို တိကျသေချာစွာ ဖြေကြားပေးရန်။
သတ်မှတ်ထားသော way plan အတိုင်း POSM ပစ္စည်းများကို Merchant ဆိုင်များတွင် သွားရောက်နေရာချထားပေးရန်/တပ်ဆင်ပေးရန်။
ပုံမှန် Customer များ၊ အလားအလာရှိသော Customer များအား Product Features များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြပေးရန်။
Product နှင့် ပတ်သက်သော ဈေးကွက်အခြေအနေများနှင့် ပိုမိုဆန်းသစ်မှု များအား စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်။
Merchant ဆိုင်များတွင် QR Stand ချထားပေးခြင်း၊ Bank Account ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
သတ်မှတ် Target အတိုင်း ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို Team Manager ထံသို့ တင်ပြရန်။
မည်သည့် ဘွဲ့ရမဆို လျှောက်ထားနိုင်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသော်လည်း အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားပြီး သင်ယူလေ့လာ လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ပါက လျှောက်ထားနိုင်သည်။
Customer/Merchant များနှင့် ‌ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
What is your salary expectation by MMK?
Product Specialist (Mandalay)
Thanlwin Dragon Co., Ltd.
Product Specialist (YGN)